Abesifazane banezinkinga eziningi. Omunye uzibheka njengowesifazane omubi, omunye umama omubi, owesithathu ucabanga ukuthi uyisibi. Ngisho nabesifazane abahle bahlale bodwa bebodwa baqala ukucabanga ngamaphutha abo. Kubaluleke kakhulu ukuba owesifazane aqaphele njengomfazi, umama nomfazi webhizinisi eliphumelelayo. Uma okungenani iphuzu lalezi zihluleka, khona-ke ukuzethemba kungatholakali.
Izinkathazo yinkinga enkulu kubo bonke abesifazane. Uma ubheka ngokuhlelekile - yini ongayithandi ngawe? Isizathu sokuqala esenza owesifazane azizonda yena uyinkimbinkimbi yobuhle. Omagazini abakhulukazi, izintombi ezinhle, umhlaba wefashini - wonke umuntu ufuna ukuhambisana nemibono yabesifazane nezibalo. Uma ufuna ukunciphisa isisindo ngokuthola isikhumba esincane, khona-ke akekho ozokuhlambalaza ngalokhu. Kuphela wena - kungani udinga ukunciphisa umzimba? Wena noma ezinye izinhloso zabantu? Uma i-uvlas iphefumula, kunzima ukuthi ukhuphuke izitebhisi noma ungajabuli ukuhlala isisindo esiningi kakhulu, ngakho-ke qiniseka ukuthi uhlala phansi kwi-nadiet futhi ungenele ezemidlalo. Kodwa-ke, uma othandekayo wakho noma umama wakho ethi kukhona okuthile okutholile, ke ungakhazi izinyembezi. Bheka isibalo sakho ngamehlo akho, hhayi ngamehlo abanye. Qiniseka ukuthi uzitholela isisindo, hhayi omunye umuntu.
Abanye besifazane banakekela ubuso obungaphelele noma amabele amancane, hhayi izinwele ezinde noma izinwele ezinkulu. Amaphutha anjalo angalungiswa kuphela ngokuhlinzwa nge-plastic. Uma bekukhona ithuba le-uvass, ubungabe ulala ngaphansi komese wokuhlinza? Kulula. Kubonakala nje sengathi bekuyoba nemali, khona-ke uzokwenza ukuhlinzekwa kwepulasitiki. Funda ngalokhu "ukukhohlisa" okungalungile, ukuyifihle kahle, nokho, ngokungangabazeki kugcizelela isithunzi sakho. Uma uphonsa isithunzi sakho, ngakho ubalalelele, khona-ke amaphutha akho amancane futhi akekho oyoqaphela.
Abesifazane abaningi bakhathazekile ngesakhiwo esiyinkimbinkimbi. Isibonelo, abanye abantu bacabanga ukuthi abapheki kahle, abahlanzi. Angiyikufihla, okuhlangenwe nakho okunjalo kaningi ku-uszarozhdaet umuntu osondelene kakhulu - indoda yakho ethandekayo. Lapho esho ukuthi isitsha asizange sisebenze, siqala ukukhathazeka ngamakhono abo okugaya. Ake sibuke lokhu ngokuthembeka. Lungiselela isidlo esisehlangothini, isobho noma isaladi konke, uqale nabafundi. Ngenhlanhla, kunezindlela zokupheka zokupheka nezithombe ezinyathelo, lapho ungafunda khona ukupheka kancane kancane. Asipheki izitsha eziyinkimbinkimbi ngosizo oluwusizo, kuphela uma ngamaholide. Thatha wena umthetho, kanye ngesonto, funda okungenani iresiphi eyodwa entsha.
Uma indoda yakho oyintandokazi isondliwe kahle, futhi ivumela ukuhamba kwamazwana, njengokuthi: "umama upheka kangcono", "awukwazi ukwenza noma yini", khona-ke ungasho ukuthi "ubaba unenzuzo kakhulu". Lena yindlela ekhungathekisayo yamadoda anamandla kakhulu abona ukuhluleka okumbalwa kuphela. Futhi, empeleni, cabanga, kungani, uma engazi ukwenza imali, kufanele upheke ngokujabulisayo? Ukuhlambalaza nokuhlambalaza okuhlukahlukene kungakwazi ukwenza umfazi ongathandeki ngisho nomfazi oziqinisekisayo kakhulu.
Inkimbinkimbi yomama yiyona evame kakhulu. Ngokuvamile kubangelwa izizathu ezimbili. Owokuqala: ukuqhathanisa ingane nezinye izingane, futhi okwesibili: isikhathi esincane esinikezwe ingane. Qhathanisa ingane yakho nabanye akufanele. Yebo, ngifuna izingane zakho zihlakaniphe futhi zifundiswe. Kodwa laba bangabantwana bakho, bakhuliswa ngawe, bathatha isibonelo somdlalo. Lokhu kusho ukuthi akukho lutho olubi kubo. Yiqiniso, uma abanye abazali beqhayisa ngokuphumelela kwezingane zabo, futhi wena, ngokuvamile, awunazo ukuziqhayisa ngakho, kuba ukuhlambalaza. Ungenzi umfana wakho omsindo aye esikoleni somculo, njengabangane, bese ubhala phansi ebhola. Uma intombazane yakho ethule futhi ethobekile, kungani uyenza ukuba idansa, ngakho wayengajabuli nesimo? Mhlawumbe ingane yakho ithanda ukudweba yedwa, ngakho cabanga amakilasi okhudozhestvennyh. Ungalingisi abangane, izingane zihlukile, wonke umuntu unethalente, akhulise futhi uzoba nokuthile okuziqhayisa ngakho, ngoba sekuvele kubaluleke kakhulu.
Inkimbinkimbi yesikhathi esilahlekile
Yebo, kufanele usebenze ukondla ingane yakho, ukhulume naye ngezimpelasonto, futhi ngezinsuku zamasonto uthola isikhathi sokupheka okuthile bese ulala. Ingane yakho ibuye idabuke ngaphandle kokunakwa, noma kunjalo, ungathola indlela yokuphuma kule simo. Zitholele uhhafu wehora yansuku zonke yengane yakho. Ungabiza ngokuthi "Half a Hour Masha", isibonelo. Masibe amahora ngaphambi kokulala noma amahora masinyane emva kwezinsuku zokusebenza. Konke lokhu, udlale, ukhulume, ubonise isithakazelo. Buza ukuzithokozisa kwe-opera, ngamagama wezintandokazi zakho ezithandayo, mayelana nezipho - noma yini engayithanda ingane. Mfundise ukuba alandele isikhathi, kulula kakhulu ukuchaza ukuthi kusuka ku-21: 00 kuya ku-21.30 isikhathi semidlalo naye, bese unezinsolo eziphoqelekile, ozenzayo ngenxa yengane. Ingane yakho izothathwa kancane kancane, ingabi yi-vasotvlechat ngesikhathi sokupheka noma yokuhlanza.
Kuvele ukucindezeleka emsebenzini ngenxa yokuthi uhola kancane, futhi mhlawumbe azi ukuthi ungaqhubeka kanjani nethimba. Ekuqaleni, kufanele uthathe isinqumo sokuthi yini efanele. Uma unenkolelo eqinile yokuthi ngokuzibonela kwakho neziqu zakho umholo kumele ube kathathu, bese ubheka esinye isikhala ngokushesha. Uma nje ungathandi umholo, noma ulungile, zama ukucabanga kancane ngalokho ongayenza enkampanini. Noma yiziphi izinto ezincane ezibalulekile, kusukela ekulungiseni umsebenzi ukuheha amakhasimende amasha. Uma usebenza ngokwengeziwe, uzobonwa ngabaphathi, futhi kungenzeka kube nezinketho ezintsha zokukhula kwenkampani. Ungesabi ukwenza imibono yebhizinisi ngokuvula ibhizinisi elizimele. Ngokuvamile, ukuthola ulwazi, abesifazane bavula ibhizinisi labo, futhi bacabangela zonke izinketho zokuthuthukiswa.
Uma inkinga yakho ukungakwazi ukuhambisana nethimba, vumela abantu babe ngabanye. Yeka ukwenza ngenxa yomuntu ozwakalayo nomsindo futhi oyisiphukuphuku, futhi nabasebenzi abayiziwula. Lena akuyona inkinga yakho, kodwa umuntu ngamunye unamakhono. Zama ukuthola mayelana nokuhlobisa, mhlawumbe othile uhlanganyele othandweni noma nje isisebenzi esibalulekile. Iqiniso lokuthi awukwazi ukwenza ubungane naye akusho neze ukuthi bangabasebenzi ababi noma u-amateur. Xoxa nabo kuphela kwi-mereneobhodimosti, ngesikhathi semini noma ngekhefu, kodwa njengobungane ngangokunokwenzeka. Ungafungi ngamathambo, phumula.
Zonke lezi zinkimbinkimbi zisekelwe kulokho okushiwo umuntu, okungcono kakhulu. Kumele uzamukele ngokwakho. Uma uzimisele ngaphakathi ngaphakathi, ungaguquki, ungahlali phansi, ucabange ngokushiyeka. Konke ezandleni zakho!
Indlela yokufunda ukubonisa uhlamvu?
Angifuni ukushada, ukugwema ukucindezelwa komndeni?
Indlela yokuxhumana nomuntu othandekayo?
Abangane noma nje abantu abalungile
Inkinga yecala lesifazane eRussia
Ingane ayifuni ukuya esikoleni
Imidlalo yokudlala ibhola yezemidlalo yezingane
Ukuthuthukiswa kwengqondo kwengane kusuka eminyakeni emibili kuya kwemi-3
Indlela yokukhulisa abazali abahle?
Kungani kukhona ukubambezeleka kokuya esikhathini?
I-Tako ne-Pekinese iklabishi
Umndeni wonke ku-Boutique Herno entsha yezipho zonyaka omusha!
UKeti Topuria wazala indodakazi! Isithombe sokuqala somntwana
Hala ngama-apula noju
Ukubheka kanjani i-resort kuyabiza futhi kuyakhazimula?